အမေရိကန်၏အယူခံဝင်မှုအားပယ်ချလိုက်သော google | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » U.S. News » အမေရိကန်၏အယူခံဝင်မှုအားပယ်ချလိုက်သော google
Posted by Bl4ck_B4dB0y on Sep 19, 2012 in U.S. News |9comments
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတလွားနှင့် မူဆလင်နိုင်ငံအများအပြားတွင် အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အငြင်းပွားဖွယ် ‘Anti Islam’
ဗီဒီယိုကလစ်ကို အင်တာနက်တွင် ဆက်လက်ထားရှိမည်ဟူသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်စဉ်းစားပေးရန် အိမ်ဖြူတော်၏ တောင်းဆိုချက်ကို Google က သောကြာနေ့တွင် ပယ်ချလိုက်ပါတယ်…
အင်း .. ဘာတွေများ ဆက်ဖြစ်ကြဦးမလဲ မသိနော် …
ကျနော်ကတော့ မှန်တယ်ထင်တာပဲ ဒါက သမိုင်းဇာတ်လမ်းကိုလှစ်ပြတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပဲ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓကို စော်ကားတဲ့ ကြေငြာအစီအစဉ်ထက်တော့ သူတို့ က မဆိုးပါဘူး သမိုင်းဗီဒီယိုကို မပယ်ချတာ ဂူးဂဲလ်မှန်တယ်လို့ ထင်တယ်ဗျ
အမှန်ကတော့.. အိမ်ဖြူတော်ဆိုတာက.. အမေရိကအစိုးရဖြစ်ပြီး.. အစိုးရက ယူတုပေါ် ဗီဒီယိုတင်တာဟာ.. ဂိုဂယ်(ယူတု)ရဲ့ကိုယ်ပိုင် လုပ်ထုံးတွေနဲ့ကိုက်မကိုက်ပြန်စဉ်းစားပေးဖို့ပြောတာပါ..။
အဲဒါကို ဂိုဂယ်(ယူတု) က အဲဒီဗီဒီယိုဟာ သူတို့လမ်းညွှန်မူတွေနဲ့ ကိုက်ပါတယ်ဆိုပြီး..ပယ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်..။
ပြောရရင်.. ယူတုရော.. အိမ်ဖြူတော်ရော.. အမေရိကန်တွေလုပ်နေ.. အုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်..။
American ဆိုတာ..noun ဖြစ်ပြီး.. adjective မဟုတ်ပါ..။
မြန်မာလိုရေးရာမှာ.. (American)အမေရိကန်(အမေရိကနိုင်ငံသား) နဲ့.. အမေရိကပြည်ထောင်စု(United States of America)ကို.. အသုံးအနှုံး မကွဲပြားလို့.. ရှုပ်ကုန်တယ်ထင်ပါကြောင်း… :harr:
/əˈmɛrɪkən/ american pronunciation American
By Gerry Shih | Reuters – Mon, Sep 17, 2012
(Reporting By Gerry Shih; Editing by Toni Reinhold
YouTube ကို Google ကပိုင်တာ အခုမှ သိပါလား။
ဘယ်လောက်တုံးတဲ့ ငါလဲ။ :chee:
ဇာတ်လမ်း တွေ ကတော့ ပိုပို ရှုပ်လာတော့မယ် ထင်ရဲ့။
အရီးလတ်ရေ။ YouTube မက တော်တော်များများ ကို Google ကပိုင်ပါသည်။ ဟီဟီ။
ဓာတ်ပုံ စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် နောက်ဆုံးသတင်းက Google က Nik software ကိုတနေ့ကပဲ ၀ယ်လိုက်တယ်တဲ့။ လာလေရော့။
အမြဲတမ်းတခုမဟုတ်တခုဖြစ်နေတဲ့ YouTube အရှုပ်အရှင်းထက် Nik Software ကို ဘယ်လို offer လုပ်မလဲဆိုတာပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။
မနေ့မနက်က တက်လာတဲ့သတင်းဗျ…Nik Software ကို ၀ယ်တယ်ဆိုတာ …
ပိုစ့်ရေးဦးမလို့ ကို အချိန် မပေးနိုင်လို့ မရေးဖြစ်သွားတာရယ်…
Nik ကို ဘယ်လို Offer လုပ်မလဲကတော့ ရှင်းပါတယ်ဗျာ …
တလောလေးဆီက Facebook က Instagram ကို ၀ယ်တာကိုးဗျ..
၀ယ်ပြီးနောက်ပိုင်း Facebook အနေနဲ့ Smartphone ထုတ်ဖို့မရှိ
Search Engine လုပ်ဖို့သာ ရှိတယ် ကြေငြာသွားသကိုး …
ဆိုတော့ Facebook ဟာ နောင်တချိန်မှာ Photo Upload/ Sharing
မှာ Instagram ရဲ့ Features တွေ ပေါင်းထည့်လာမယ့်အချိန်မှာ
Google ကလည်း သူ့ရဲ့ Picasa နဲ့ Google+ တွေမှာ Nik Features
တွေ ပေါင်းထည့်ဦးပေမပေါ့ …။
Nik ကို ၀ယ်တဲ့ အကြောင်းပြချက် နောက်တခု ကတော့ Apple နဲ့ ကြားက Proximity
ကို ဆွဲဖြဲလိုက်တာပါပဲ ..Nik က ထုတ်တဲ့ SnapseediOS ပေါ် Run တဲ့ Photo editing software
ဟာ 2011 Application of the Year ဆုရထားပါတယ်။ Nik ဟာ Android အတွက် App
Develop လုပ်ပေးခြင်း မရှိပါဘူး…။ ဆိုတော့ .. နောင်တချိန် Snapseed Android Version
P.S Desktop Version Stand Alone Snapseed ၀ယ်မား … ဒေါ်လှ၂၀ တဲ့…
(ကျုပ်တော့ မ၀ယ်ပေါင်…. အဒိုဘီမှ အဒိုဘီ ပဲဗျို့ …ခိခိ)
သဂျီးပေးတဲ့ လင့်တွေ လိုက်ကလိတာ ဘာမှမတွေ့လို့ပါ
ကျုပ်လည်း သိပ်ခေတ်နောက်ကျနေတာ ခုမှသိရတော့တယ်
ခင်ဗျားတို့ပြောနေကြတာတွေကို ကျုပ်တို့ကတော့ တစ်ခုမှနားမလည်ပေါင်။
Yes, Google does not need to remove that video clip from its website as the violent is not their responsibilities. The person who post the video has the responsibility for his video but it’s funny when muslims react this video and turned into violent/terrorist people as there are plenty of other racisim/propaganda videos against Buddhism/Christianity/Judaism/Hinduism and all but no one turned to terrorist and kill people because ofastupid video clip posted on Youtube. Only muslims turn into violent and kill innocent people… Like some comments in that video clip, the truth hurts, hey…
It’s more than 10 million viewer of that clip and it’s fun to read the comment of how people disgust the muslims/Islam around the world.